Ngaba ungandicacisa ukuba ungaqala njani ukusasaza ngeTwitch. Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ngaba ungandicacisela ukuba ungaqala njani ukusasaza kwiTwitch.
Meyi 5, 2021 0 IiCententarios 305
Ukuba ufuna ukwazi ungaqala njani ukusasaza kwiTwitchKungenxa yokuba ukwazi eli qonga kwaye kwinqanaba elithile uqhelene nalo, mhlawumbi ulandela enye yeendlela ezininzi ezisasaza kweli qonga kwaye uziva ukwazi ukuba yinkonzo yokusasaza ngempumelelo. Kule meko, siza kukuxelela ukuba ngawaphi amanyathelo oza kuwalandela ukusasaza kweli qonga.
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ekufuneka uyazi kukuba nangona kukho usasazo ngqo, ikwakhona imo yokuhanjiswa kwakhona. Ukuze ukwazi ukujoyina oku imilambo iqela, Ngubani owenza olu hlobo lwezinto, eyona nto ibalulekileyo kukuba yinxalenye yeqonga leTwitch. Indlela yokwenza ngolu hlobo lulandelayo:
Qwalasela iphaneli yokulawula:
Nje ukuba ungene eqongeni. Yiya kwicandelo lePaneli yokuLawula, kule nto kuya kufuneka uqwalasele yonke imicimbi yejelo lakho.
Gcwalisa ulwazi oluhambelanayo Umjelo wethu wothumelo, oko kukuthi, into yokuqala sisihloko kunye nezaziso zosasazo ngqo, udidi esiya kulo ijelo, iilebheli eziza kusetyenziswa kunye nolwimi esiza kuqhuba ngalo. Kubaluleke kakhulu ukuba sifunde ubalo lwamanye amajelo kwaye senze isicwangciso sokwenza ngokuhambelana nokufezekiswa kweenjongo zethu.
Icandelo lolwandiso izakusibonisa iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo ekufuneka sizikhethele ezo zilungele iimfuno zethu ukufezekisa impumelelo yethu kwaye sizoyise njengoko sifumana amava ngakumbi kusasazo ngqo kunye nosasazo.
Icandelo leziganeko Ayifuni nkcazo iphambili, kuba kule nto siza kuyenza, siyilungiselele kwaye siyicwangcise iminyhadala esifuna ukuyidlulisa kwisitishi, ezi kufuneka zicingwe kwaye zikhawulwe ngononophelo olukhulu kuba zezona kanye ezizakusenza sivelele isuka kwamanye amajelo.
Kwaye nangokunjalo Linye nelinye lamacandelo inkqubo eya kuthi inike ukuba liqwalasele kwaye uya kuba nakho ukuhambisa, ngethamsanqa.
1 Kubalulekile ukwazi:
2 Qwalasela iphaneli yokulawula:
Uyenza njani iividiyo ezinde kwiYouTube?
Ungayihlaziya njani i-YouTube?